ဖိုင်ဘာလေဆာအမှတ်အသားစက် ဆိုတာဘာလဲ။ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့်စက်ရုံမှအကောင်းဆုံး ဖိုင်ဘာလေဆာအမှတ်အသားစက် မှအကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေရန်
YU WEI INDUSTRY SUPPLY CO., LTD. ၏အကြီးမားဆုံးထုတ်လုပ်သူများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ဖိုင်ဘာလေဆာအမှတ်အသားစက် in Taiwan။ ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ကုန်ရှိသမျှသောလောကီကိုတင်ပို့လျက်, သူတို့စူပါအရည်အသွေးနှင့်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းကောင်းတစ်ဦးဂုဏ်သတင်းကိုခံစားကြရသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အသစ်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များပေးဝေနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏ပစ်မှတ်ဖြစ်သည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစတိုင်များအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ - YW150LMM
ဖိုက်ဘာလေဆာသည်လှိုင်းလှိုင်းတွင်ပိုမိုတုန်ခါမှုရှိသည်,နိမ့်ကျခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်မှုကောင်းခြင်း.၎င်းသည်ပြင်ပဖုန်မှုန့်နှင့်စက်ပစ္စည်းလျော့ရဲမှုဒဏ်ကိုမခံရပါ,နှင့် output laser beam သည်တည်ငြိမ်သည်.
ထိန်းသိမ်းမှုနည်းသည်,မြင့်မားသော photoelectric ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းသည်,ပါဝါသုံးစွဲမှုနည်းသည်,အသုံးပြုမှုစရိတ်သက်သာသည်.
အမှတ်အသားအကွာအဝေး:၁၅၀ မီလီမီတာ x ၁၅၀ မီလီမီတာ
Min Line Width:0.01~0.၂ မီလီမီတာ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ：AC220v ဖြစ်သည်/60Hz ဖြစ်သည်
စက်အရွယ်အစား:၉၄ x ၇၉ x ၁၅၅ စင်တီမီတာ
သတ္တုသို့မဟုတ် Non ပေါ်တွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်-သတ္တုပစ္စည်းများ.ထွ:ယူအက်စ်ဘီ,SD ကဒ်,အိုင်စီ,Wafer များ,ခလုတ်အမျိုးအစားများ,သံမဏိ,လူမီနီယမ်,ကြေးနီ,သွပ်သတ္တုစပ်,ဆဲလ်ဖုန်းကိစ္စ,ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာ,နှင့်အခြားပစ္စည်းများစသည်တို့.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cnclathemachine.com.tw/my/fiber-laser-marking-machine.html
အကောင်းဆုံး ဖိုင်ဘာလေဆာအမှတ်အသားစက် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် ဖိုင်ဘာလေဆာအမှတ်အသားစက် မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ